Ha Ku Xad Gudubin Grace, Kaniisadda Caalamiga ah ee God Switzerland (WKG)
Weligaa ma aragtay wax sidan oo kale ah? Tani waa waxa loogu yeero alwaax-xaraf [5-centime piece]. Intii lagu jiray Dagaalkii Sokeeye ee Mareykanka, qoryaha noocan oo kale ah waxaa soo saaray dowladda halkii laga isticmaali lahaa qadaadiicda caadiga ah. Si ka duwan qadaadiicda caadiga ah, kuwanu ma lahayn qiime dhab ah. Markii dhaqaalihii Mareykanka soo maray dhibaatadiisii, ujeedkeedii waa laga waayey. In kasta oo ay haystaan ​​shaabad isku mid ah oo ay la egyihiin qaddar sax ah, qof kasta oo iyagu lahaa wuxuu ogaa inaysan qiimo lahayn.
Waan ka warqabaa inay nasiib darro tahay inaan sidan nimcada Ilaah ku arki karno. Waan ognahay sida wax dhab ah u dareemaan iyo inay yihiin wax qiimo leh, laakiin mararka qaar waxaan u degsanaa wax uun loogu yeedhi karo nimco rakhiis ah, qiimo la'aan ah, oo isdabamarinaysa. Nimcada uu Masiixu ina siiyay ayaa macnaheedu yahay xorriyadda buuxda oo ka timaada xukunka aan u qalano. Laakiin Butros wuxuu naga digayaa: Noolow sida xorta ah oo ha u ekayn inaad xor u tahay inaad xumaanta xumaan ka dhigto (1 Butros 2,16).
Wuxuu ka hadlayaa alwaaxda-nikadda nimcada ”. Kani waa nooc nimco ah oo loo adeegsado marmarsiinyo in lagu caddeeyo dembiga joogtada ah; maahan su'aal ah in loo qirto Ilaah si ay u helaan hadiyadda cafiska, ama ay ugu timaado xagga Ilaah toobad keenis, in la weydiisto kaalmadiisa oo sidaas loo cafiyo jirrabaadda iyo is beddelka iyo xorriyadda cusub xooggiisa soo maray. Nimcada Ilaah waa xidhiidh ina aqbala oo dib noo cusboonaysiiya muuqaalka Masiixa iyada oo loo marayo shaqada Ruuxa Quduuska ah. Ilaahay deeqsi nimcadiisa ha ina siiyo. Khasab naguma aha inaan isaga siin wax cafis ah. Laakiin aqbalaadda nimcadiisa waxay noqon doontaa mid qaali ah annaga; gaar ahaan, waxay inaga dhimayaan kibirkayaga.
Dembigeenu had iyo jeer wuxuu ku yeelan doonaa cawaaqib xumo nolosheena iyo nolosha kuwa hareeraheena ah, iyo ciladaheena ayaan iska indha tireynaa.Dambigu had iyo jeer wuxuu farageliyaa wanaagga qaybteena ah saaxiibtinimo farxad leh oo nabad ah iyo wehelnimo lala yeesho Ilaah. Dembigu wuxuu inoo horseedaa u dhaqaaqitaanno caqli gal ah oo wuxuu horseedaa isu-xaq-soor. Ka badbadinta nimcada waxay la jaan qaadaysaa nolosha joogtada ah ee cilaaqaadka wanaagsan ee Ilaah uu inoogu suurta geliyey Masiixa. Saas ma aha, waxay ku dhammaataa garaaca nimcada Ilaah.
Waxa ugu xun ayaa ah in nimcada rakhiis ah ay hoos u dhigto qiimaha dhabta ah ee nimcada, taas oo ah waxa ugu qaalisan adduunka. Nimcadii na siisay nolosha cusub ee Ciise Masiix runtii aad bay qaali u ahayd in Ilaah qudhiisu naftiisa u huray madax furasho. Isaga ayay ku kiciyeen wax kasta, oo haddaan u adeegsanno marmarsiinyo inuu ku dembaabo, waxay la mid tahay inaan kula soconno boorso alwaax ah oo annaguna isu naqaan milyaneer.
Wax kastoo aad sameyso, ha isticmaalin nimco rakhiis ah! Nimcada runta ahi waa sidaas oo aan qiimo lahayn.